မကြည့်စေချင်တဲ့ website လေးတွေ - MYSTERY ZILLION
မကြည့်စေချင်တဲ့ website လေးတွေ
ကျနော့် Computer မှာ Internet သုံးတဲ့ အခါ ... မကြည့်စေချင်တဲ့ website လေးတွေ ကြည့်လို့မရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ .... :106:
ဘယ်လို Software တွေသုံးရင် ရနိုင်မလဲ။
eg. person.com လိုနေရာမှာ chat နေတာကို ပိတ်ချင်တယ်။
Internet နဲ့ Direct ချိတ်ထားတာပါ။ Proxy Server မထားပါ။ ကျနော့် Computer မှာ သုံးတာကိုပဲ ပိတ်ချင်တာပါ။
ကိုယ်ကဘာမှသိပ်မတတ်တော့ လွယ်တာလေးပဲစဉ်းစားမိတယ်။ ကွန်ပျူတာကို ကိုယ်က Admin right ကသုံး၊ တခြားသူတွေကို limited user ပေါ့ဗျာ။ control panel ထဲက Internet Properties, Security, Restricted sites က sites ကိုရွေး Add this website to the zone နေရာမှာ မကြည့်စေချင်တဲ့ URL ထည့် Add ကိုနှိပ်။ အဲဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ တခြားသူတွေ Admin right မဟုတ်ရင်ပြန်ပြင်လို့ မရနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ သူများတင်မကဘူး ကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်လို့ မရတော့ဘူးနော်။ ပြန်ကြည့်ချင်ရင်တော့ အဲဒီထဲပြန်၀င် remove ပေါ့ဗျာ။
ကျနော် အဲဒါနဲ့ လုပ်ကြည့်ဖူးတယ် Bro ... မရလို့ ... :2:
ကျနော် လုပ်တာအဲဒီတိုင်းပဲဗျ။ ။
Bro သေချာပြန်စမ်းကြည့်ပါလား ... တခြားနည်းသိခဲ့ရင်လဲပြောပြပါဦး .... :77:
Free Website Blocker ကို သုံးကြည့်ပါလား အကိုရာ ကျွန်တော်တော ့မသူံးကြည့်ဖူးဘူးဗျ
အဲဒီမှာ လေ ့လာကြည့်လိုက်ပါလား နော်။
အရင်ဆုံး C:\_WINDOWS\_SYSTEM32\_DRIVERS\_ETC ထိသွာလိုက် ...အဲဒီမှာ hosts file ကိုတွေ့လိမ့်
မယ် ၊ hosts file ကို note pad နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ ။ အောက်ဆုံးနားလေးမှာ 127.0.0.1 localhost ဆိုတာကို
တွေ့လိမ့်မယ် ၊ အစ်ကိုက person.com ကိုပိတ်ချင်တာဆိုတော့ .......... 127.0.0.1 localhost နေရာမှာ
ပြီးရင် save လိုက်ပါ ၊ reboot ပြန်ပေးပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပါ ။ အဆင်ပြေပါစေ Bro...........:)
ကျွန်တော်စမ်းပြီးတွေ့တာကတော့ဒီလိုဗျ။ firefox မှာပဲလုပ်ရမှာ
firefox ကိုဖွင့် tools==>Options==>Privacy အောက်က cookies ဆိုတဲ့နေရာမှာ exceptions ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ box တစ်ခုကျလာရင် address of web site ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ် block လုပ်ချင်တဲ့ ဆိုဒ်ကိုရိုက်ပြီး block ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီး ပိတ်လို့ရတယ်ဗျ။
ကျွန်တော်တွေ့တဲ့နည်းက ဟုတ်ရဲ့လားတော့မသိဘူး ကျွန်တော်ရှာတွေ့တာလေးကိုတင်ပြလိုက်တာပါ။ အဆင်ပြေမပြေပြောခဲ့ဦးနော့်။
နေ့လည်ကစမ်းလုပ်ကြည့်ပြီး ကွန်ကျချိန်နဲ့တိုးနေတော့ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ site ခေါ်မရတာကို ရပြီဟေ့လို့ထင်ပြီး post တင်လိုက်မိတယ်။ ရှက်လိုက်တာနော်။
ဟုတ်တယ်ဗျ ကိုAlexander အဲဒီနည်းနဲ့ မရပါဘူးခင်ဗျား။
ကိုညလေး ပြောတဲ့နည်းလဲရတယ်ဗျ ၊ ဒါပေမဲ့ user က internet explorer ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီနည်းက
အသုံးမဝင်ေတော့ပြန်ဘူးဗျ၊ IE မှာလဲ ထပ်ပိတ်ဖို့လိုသွားပြန်ရော ၊ :D ၊ IE ကိုလည်း FF မှာလိုပဲထပ်ပြီး
ပိတ်လို့ရပါတယ် ။ နှစ်ခါပိတ်ရတာပေါ့ဗျာ ၊ အဲဒီနည်းတွေမသုံးချင်ရင် FF အတွက်ဆိုရင်လည်း add-on တစ်မျိုးကိုသုံးလို့ရပါတယ် ။ အဲလိုတွေရှုပ်လို့ ကျွန်တော်က system32 ကနေပိတ်တာလေးကိုပြောပြတာပါ။
စမ်ကြည့်လိုက်ပါ Bro................ဘာပိတ်သလဲမမေးနဲ့ ။ :D
hosts file မှာ extension မရှိပါဘူး။ အဲဒီ file ကရှိပြီးသားပါ Create လုပ်စရာမလိုပါဘူး။
My Computer ကနေသွားပြီး Notepad နဲ့ဖွင့် edit လုပ်ရပါတယ်
Save ပြီး reboot လုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ
ကို Divinity ပြောသလိုပါပဲ ။ edit လုပ်တာပါ ။ အစ်ကိုက save as နဲ့သွား save တယ်နဲ့တူပါတယ် ။ အဲဒါ
ကြောင့်ပါ ၊ အခုပြောတဲ့နည်းက vista မှာရော XP မှာပါအလုပ် လုပ်ပါတယ်။ အစ်ကို block လုပ်ချင်တဲ့ဆိုက်
ကို ထည့်ပြီးတာနဲ့ note pad နဲ့ဖွင့်ထားတာကိုပိတ်လိုက်ရုံပါပဲ ၊ file ကို replace လုပ်လိုက်တာပါ ။
မရဘူး ညလေးရဲ့ ....
အကိုထင်တာက ... အဲဒါက Cookie တွေကိုပဲ Block တာထင်တယ်။ website ကိုတော့ မပိတ်ဘူး ...
Anyway , .... Thank you ....
Bro ရေ ........ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
ကျနော်ပြင်တာကို copy ကူးပြမယ်။
မှားနေရင် ... ပြောပြပေးပါဦး။
ပထမဆုံးမှာ person.com လို့ပဲရေးရမှာလေ ...နောက်ပြီး ဒုတိယတစ်ခုမှာလည်း http:// အဲဒါကြီးမလိုဘူးလေ ။ ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲရေး
edit လုပ်ပြီးရင် save ပြီး reboot ပြန်ပေးအုံးနော် ။ အဆင်ပြေပါ
စေ Bro ။
အဲဒီ software က IE မှာတော့ Block လုပ်ပေးတယ် Bro ... တခြား Browser တွေမှာ အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ပြီးတော့ 30 days Trial Version.
အခုတော့ Free Website Blocker Software လေးတွေ လိုက်ရှာနေတယ် ။ အသုံး၀င်တာ ရခဲ့ရင် Share ပေးပါမယ်။
ကျေးဇူးပါ ...... :6:
firefox add-on ကိုသုံးချင်ရင်တော့ ဒီမှာပါ
ကျနော်ဘယ်လိုမှမရဘူးဖြစ်နေတယ် ... Bro ပြောတဲ့ အတိုင်း လုပ်တယ်။
reboot လဲ လုပ်ပါတယ်။ အခု Bro ပြောတဲ့ add on စမ်းကြည့်ဦးမယ်။
မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ ၊ ရကို ရ...ရမှာ...:39::39: ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးစမ်းပြီးပါပြီ ၊ ရပါတယ် ။ အခုအစ်ကိုပြထားသလိုလုပ်တယ်ဆိုရင် ရကို ရ..ရ မှာ။ ကိုရဲထက်ကြီးရော ဘယ်လိုလဲမသိဘူး....သူလဲ
အစ်ကိုက XP သုံးတာထင်တယ် ။ အဲဒါဆိုရင် ဒီလိုပြန်လုပ်ကြည့်အုံးဗျာ...........
အဲဒါဆိုရင်တော့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ် ၊ reboot တောင်ပေးစရာမလိုပါဘူး ။ ပြန်လုပ်ကြည့်ပါအုံး Bro....
နဂိုရှိတာတွေကို ဒီတိုင်းထားပါ။ ( localhost 127.0.0.1 အပါအဝင်ပါ)
domain name ၁ ခုကို ၂ လိုင်း ရေးပေးရပါမယ်။ ကို kyawmin ရေးပြထားသလိုပါ။ www ပါတာ ၁ လိုင်း မပါတာ ၁လိုင်းပါ။ 127.127.127.127 ကိုသုံးမယ်ဆိုကျပါစို့ ။ Example:
(Notes: space များများခြားပါ။ :P You should not remove localhost entry. Moreover, localhost should be 1st entry in your host file, mean on top of all other domains. Well, better close your browser before editing hosts file)
ပြီးရင် troubleshoot လုပ်ကြည့်ရအောင်။
2. Issue2commands to make sure your hosts file information is loaded
3. Command prompt မှာ 'ping person.com' ကိုရိုက်ကြည့်ပါ။ IP 127.127.127.127 ကိုping တာမြင်ရပါမယ်။
Pinging person.com [127.127.127.127] with 32 bytes of data:
အဲလိုမဟုတ်ရင်တော့ ဘယ်နားမှာမရတာလဲ detail လေးပြောပေးပါခင်ဗျာ
XP မှာဆိုရင် ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောခဲသလိုလုပ်ရင် ရပါလိမ့်မယ် ။ Vista မှာ 127.0.0.1 localhost ဆိုတဲ့နေရာမှာ
127.0.0.1 preson.com ဆိုပြီးတန်းရေးရင်အလုပ်လုပ်ပါတယ် ။ XP မှာဆို အလုပ် မလုပ်ပါ ၊ 127.0.0.1 localhost ကိုမူလအတိုင်းထားပြီးမှ နောက်ထပ်
လို့ထပ်ရေးပေးမှ အလုပ်လုပ်ပါတယ် ။ အဲဒါဆိုရင် reboot ပေးစရာတောင်မလိုပါ ၊ အလုပ်လုပ်ပါသည် ။:D:D
ကိုkyawmin ရေ ကျွန်တော်ကတော့ အပေါ်မှာတင်ခဲ့တဲ့ post မှာပါတဲ့ ပုံအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတယ်။ Vista နဲ့ပါဗျာ။
ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရတယ်ဗျ ၊ XP မှာရော ၊ Vista မှာရော အကုန်ရတယ် ။ ဒီပိုစ့်မှာပြောထားသလိုလုပ်ကြည့်ရင်ရော....???????
hosts file မှာသွားပြင်ပြီးလုပ်တဲ့နည်းဘယ်နည်းနဲ့မှ မရပါခင်ဗျား ....
ကိုကျော်မင်းပေးတဲ့ FireFox add-on (working on FireFox) ရယ်။
greyfindor ပေးတဲ့ webblock software (working on IE) ရယ် ...
အဲဒီနှစ်မျိုးသုံးပြီး Block ထားတာ အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ ....
greyfindor ပေးတဲ့ webblock software လေးက Trial Version ဖြစ်နေတော့ Full Version ရအောင်ရှာရမယ်။ ပြီးတော့ တခြား webblock software လေးတွေ ရှာပြီးစမ်းဦးမယ်။ အသုံး၀င်တာလေးတွေ တွေ့ရင် ကျနော် ဒီ Thread မှာပြန်တင်ပေးပါမယ်။
Bro တွေအားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် မုန့်လိုက်ကျွေးမယ် ....
( April6to May first week အထိ Alexander ရန်ကုန်မှာ ရုံးပြန်ထိုင်ရပါမယ် ... MZ Friendz တွေ အကုန်လိုက်တွေ့မယ် ... :65: ... \_:D/ )
I think this http://www1.k9webprotection.com will help your needs. I haven't try it, but it's free :5:. You can read the review and download from
Have fun with all your blocking things! \_:D/
Please look at this video and flag for inappropriate.
youtube link >> http://www.youtube.com/watch?v=G_XCp0mq9Qs
YouTube Glossary: Flag As Inappropriate